Ide Ihe Adighi Acku, O choro Omume | Martech Zone
Ezigbo enyi m, Wendy Russell, bụ onye na-emepụta telivishọn na onye edemede. Ọ kwadoro usoro ihe ịga nke ọma na HGTV nke a kpọrọ She's Crafty. Anyị bụ ezi ndị enyi kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ ugbu a, ụjọ na-atụ m na ọ nwere ihe okike ya na ịkwọ ụgbọala kemgbe ọtụtụ afọ.
Onwe m, echeghị m onwe m dị ka onye okike ma ọ bụ onye edemede. Mana ubochi obula, achoputara m na mcheputa uzo puru iche ma weputa oge ide akwukwo. N’agbanyeghi na abum onye ode akwukwo, ma echeghm onwe m dika onye edemede. Ikekwe, ọ bụ mmejọ m na-amaghị nke ọma na asụsụ ụtọ asụsụ na-eme ka echiche m dị iche.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla, ana m ahụ mgbasa ozi a na-agba na Facebook ma ọ na-ewute m oge ọ bụla m hụrụ ya.
Echeghị m ide ara, ma ekweghị m edemede siri ike. Ihe m mụtara n’ime afọ iri gara aga bụ na ide ihe chọrọ nraranye na omume.
Anaghị m enwe mkpali n'ọtụtụ ihe - mana ide ederede bụ otu n'ime ihe ndị ahụ na-egbochi m n'abalị. Mgbe m na-enweghị a blog post, M n'ụzọ nkịtị nwere a siri ike oge na-elekwasị anya n'ihe ndị ọzọ m na-ebute ụzọ. Ọtụtụ oge, aga m arụ ọrụ ụbọchị niile n'ọtụtụ ọkwa ka m nwee ike lekwasị anya na ọrụ ndị ọzọ maka ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Wendy is onye edemede, ya mere ajụrụ m ya ka o siere ya ike ide ihe mgbe ụfọdụ. O kwuru na o siiri ya ike ruo mgbe ọ gụrụ akwụkwọ ahụ Zọ Artist. Wendy kwuru na akwụkwọ Julia Cameron nwere nnukwu mmetụta na edemede ya - yana ọrụ ya. Nke mere na, afọ ole na ole ka e mesịrị, Wendy gara nnọkọ na Ms. Cameron ma kelee ya n'onwe ya.
Amazon: Site n'ụkpụrụ bụ isi na ngosipụta okike bụ ndu ebumpụta ụwa, Julia Cameron na Mark Bryan na-eduga gị site na mmemme izu iri na abụọ iji weghachite ihe okike gị site na ọtụtụ mgbochi, gụnyere ịmachi nkwenye, ụjọ, imebi onwe onye, ​​ekworo , ikpe ọmụma, ị addicụ ọgwụ ọjọọ, na ikike ndị ọzọ na-egbochi mmadụ, jiri obi ike nkà na arụpụta ihe dochie ha.
Julia Cameron kwenyere na onye ọ bụla nwere ihe okike na onye ọ bụla nwere ikike ide. Mgbe afọ iri nke ide ihe, ekwenyere m otu ihe ahụ. Ide ede esighi ike ọzọ. Na ide anaghị ackụ. Ọ bụrụ n’olile anya ịbụ ezigbo ahịa, ekwere m na ịchọrọ ịbụ ezigbo onye edemede. Ikekwe Thezọ Artist bụ mmemme maka gị (nke ahụ bụ njikọ njikọta m gụnyere)!
Jul 6, 2013 na 2: 46 AM
Yap i zuru oke nke m kwenyere na gi !!
Jul 9, 2013 na 10:00 PM
M nnọọ ike ikwere gị. Emeela m ọtụtụ ihe na ndụ m; orchestration and composing, visual art, poetry, management, and prose prose abụwo ihe siri ike nye m. Otu n'ime ihe kpatara ya bụ mgbe gị na onye editọ ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị na-arụkọ ọrụ ebe okwu gị dị, nke ọma, dezie, mbụ na-adaba na ndezi.
Ejirila m okwu 500 karịa ogologo oge ma tinyekwuo uche karịa ka m mere iji nweta otu egwu, uri ma ọ bụ nka ọhụụ. Enweela m ọzụzụ dị ukwuu dịka onye edemede, hey, ikekwe nke ahụ bụ nsogbu ahụ.
Inweta ide ihe, bụ ihe kachasị sie ike na ndụ m.
Achọghị m ịma ihe ọ bụla Rob kennedy kwuru, m kwenyere na gị. N'ihi na -enweghị agụ akwụkwọ ya agaghị ekwe omume ikpokọta ihe ọmụma wee bụrụ ezigbo onye edemede. Daalụ maka ezigbo post gị